स्वस्थ शरिर नै मानिसको शक्ति हो भन्ने मूल नाराका साथ अगाडि सारिएको सो कार्यक्रममा कास्कको प्रायेग सवैभन्दा महत्वपुर्ण भएको डा. अग्रवालले बताउनुभयो । यस वाहेक हात धुने, सामाजिक दुरी कायम गर्ने र सजग बन्ने नै महत्वपूर्ण उपाय भएको उहाँले बताउनुभयो । हावावाट पनि सर्न स्क्ने कुार वाहिर आएकोले अहिले मास्क नै सवैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल सुनचाँदी ब्यसायी महासंघका उपाध्यक्ष एवं ब्यवसायीक हितका निमित्त गठीत समितिका संयोजक पवन कुमार अग्रवालको ग्रसरतामा सो कार्यक्रमको ायोजना गरिएको हो । कार्यक्रम नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका महासचिव धर्मशुन्दर बज्राचार्यले गर्नुभएको थियो ।
मोरङको रङगेलीमा जन्मिएका डा. अग्रवाल नेपालको पुरानो र अनुभवी ब्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।